Le mot du Ministre – Matp
Ao anatin'ny firafitry ny Governemanta ankehitriny dia nankinina tamiko ny Departemanta miandraikitra ny Fanajariana ny Tany sy ny Asa Vaventy. Ny fampitambarana ireo rafitra roa ireo dia natao mba hiantohana ny fahavitan'ny tetikasa lehibe andrasana amin'ny Governemanta amin'ny lafiny fotodrafitrasa sy fampitaovana. Izany dia manaporofo ny halehiben'ny iraka ampanaovina ny Minisitera izay tarihiko ankehitriny. Ny fanavaozana eo amin’ny lafiny fananan-tany eny amin’ny Sampan-draharahan’ny fananantany miampy ny fananganana ny Minisitra lefitra miadidy ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana dia manatsara hatrany ny andraikitry ny sampan-draharaha hiadidiako momba ny fampandrosoana ity firenena mamin-tsika ity.
Na izany aza, ny iraka toy izany dia mitaky ezaka tsy tapaka, asa tsy miato ary finiavana mafy handroso. Tsaroako etoana ny teny filamatra izay saro-bidy tamiko fony aho Minisitry ny Fanajariana ny Tany sy ny Fitsinjaram-pahefana : « Fanovàna amin'ny alàlan'ny asa ». Mbola mitoetra izany ankehitriny ary mbola mitana ny toerany eto anivon’ny Minisitera ihany koa. Efa azo tsapain-tanana ny fanovana raha tsy hiresaka afa-tsy ny fanatsarana ny làlana eto amintsika na an-tanàn-dehibe izany na amin'ny sehatra nasionaly. Eo koa ny amin'ny fampanarahana fenitra ny fizarana taratasy fanamarinana (actes) maro tamin’ny alalan’ny fampiasana ny teknolojia vaovao momba ny fifandraisana.
Ny Minisiteran’ny Fanajariana ny Tany sy ny Asa Vaventy (MATP) dia mitoetra ho andry lehibe eo amin’ny fanatanterahana ireo tetikasa lehibe an-dalam-panatanterahana izay tafiditra ao anatin’ny politika ankapoben’ny fanjakana (PGE), ny programan’asa ary ny drafi-panatanterahana ho an’ny fampandrosoana mirindra eto amin’ny faritry ny firenena.
Asa matihanina, fanavaozana, fitondrana tsara tantana ary mangarahara, ireo no teny mibaiko izay manentana sy mitarika ny asan’ny Minisitera isan’ambaratongany.
Koa manentana ny tompon’andraikitra rehetra eo anivon’ny Minisitera sy eo anivon’ireo sampan-draharaha miankina aminy aho mba hiasa mafy araka izay azo atao na aiza na aiza toerana hiasan’izy ireo.
Alao hery ary! amin-keri-po sy fanoloran-tena ary fahafoizan-tena mba hahatonga ny fandrosoan’i Madagasikara ho reharehan-tsika. Hanome ny tsara indrindra avy amin-tsika isika amin’ny fanatanterahana ireo asa izay nankinina tamintsika tsirairay avy eto anivon’ny Minisitera.
Ireo fanavaozana lehibe sy ireo asa goavana efa an-dalam-panatanterahana ary ireo mbola ho avy dia ho tsangam-bato tsara indrindra ho an-tsika sy ho an’ireo taranaka fara aman-dimby. Eny, na mbola lavitra aza ny dia, na mbola maro ireo asa miandry, raha samy mandray ny andraikiny eo amin’ny toerana sy asa misy azy ny tsirairay dia ho azo tsapain-tanana tsy am-pisalasalàna ny fiovàna izay andrasan-tsika.
Mazotoa mitsidika daholo !!!